ပြင်သစ်ဘုရင်လူးဝစ် XVI ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု ဗိုလ်မှူးကိန်းဂဏန်းများ & Events
by ရောဘတ် Wild
လူးဝစ် XVI သည်အဘယ်သူ၏နန်းစံပြင်သစ်တော်လှန်ရေးသို့ပြိုကျပြင်သစ်စိုးစံလေ၏။ နိုင်ငံခြားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်မိမိဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူ coupled အခြေအနေနှင့်အပေးအယူ, နားလည်နိုင်ဖို့ရန်သူ၏ပျက်ကွက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်သူ၏သေဒဏ်စီရင်၏ဖန်တီးမှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
အနာဂတ်မှာလူးဝစ် XVI ပြင်သစ်ရာဇပလ္လင်မှအမွေခံရန်, သြဂုတ်လ 23 1754 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်; သူလူးဝစ်-သြဂုတ်လဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ 1765 လူးဝစ်မိမိအထဲ၌ထိုနာက်ရဲ့သေခြင်းအပေါ်, မိမိအဘထံသို့မွေးဖွားတတိယသားပလ္လင်တော်မှသစ်ကိုအမွေဆက်ခံသူဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်။
သူကဘာသာစကားနဲ့သမိုင်းတစ်စိတ်အားထက်သန်ကျောင်းသားဖြစ်ရပြီပုံနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်များမှာအကောင်းနဲ့ပထဝီထဲမှာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမယ့်သမိုင်းပညာရှင်ကသူ့ထောက်လှမ်းရေးများ၏အဆင့်အဖြစ်ခွဲခြားထားတယ်; သူကလိမ္မာပါးနပ်ခဲ့တူသောခြုံငုံတစ်ခုကိုကြည့်ရှုသည်။ သူက reserved ခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ရန်သွန်သင်ခဲ့ပေမယ့်ဒီအမိုက်မဲမှုအတွက်တစ်ခါတစ်ရံမှားခဲ့ပါတယ်။
မယ်တော် 1767 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့နှင့်လူးဝစ်ယခုသည်စိုးစံသည်ရှင်ဘုရင်သည်သူ၏အဖိုးနှင့်နီးစပ်သောကြီးပွားသတည်း။ 1770 ခုနှစ်တွင်သူသည်မာရီလူကြိုက်များတာကိုလက်ခံရရှိသော်လည်းက Marie-Antoinette, လူးဝစ် '' စိတ်ပညာနှင့် technique ကိုထက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေသည်သန့်ရှင်းသောရောမဧကရာဇ်၏သမီး, ဒါပေမယ့်ပြဿနာတွေ, နှစ်ပေါင်းများစွာအိမ်ထောင်ရေး consummating မှသူတို့ကိုတားဆီးလက်ထပ် သားသမီးများ၏ကနဦးမရှိခြင်းအဘို့အပြစ်ဖို့ကြတယ်။ လူးဝစ်အမြဲ Marie သူ့ကိုကျော်လွန်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခြင်း၏အနည်းငယ်ကြောက် - မာရီရဲ့မိသားစုအလိုအလျောက်အဖြစ် - ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ကလေးဘဝသှနျသငျ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ။ ၏မူလ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး ။
လူးဝစ် XV 1774 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါလူးဝစ်လူးဝစ် XVI, အသက် 19 အဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့သူစေသောနှင့်တိတ်ဆိတ်ပါပြီပုံ, ဒါပေမယ့်ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပနှစ်ဦးစလုံးသည်, မိမိနိုငျငံတျော၏ရေးရာအတွက်စစ်မှန်သောစိတ်ဝင်စားမှုများပိုင်တော်မူ၏။ ဒီသမိုင်းပညာရှင်တို့က overemphasised ထားပြီးပေမယ့်သူကပြင်သစ်ရေတပ်နှင့်စက်ပြင်နှင့်အင်ဂျင်နီယာတစ်ကိုးကွယ်ဆည်းတခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူ, နေရာတိုင်းတခြားကြောက်ခြင်းနှင့်အဆင်မပြေမဲလာသောအခါ, စာရင်းများနှင့်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူအဆင်ပြေစွဲလမ်းပေမယ့်ခဲ့သည်။
လူးဝစ်လူးဝစ် XV သူကလူတွေကိုလိုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်အကြီးအကျယ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လျှော့ချဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူး, သူ၏အစိုးရအတွက်လိုလားတဲ့ parlementary အဖွဲ့ခွဲဒါဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကူးခဲ့လူးဝစ်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သောပြင်သစ် parlements ၏အနေအထားကိုပြန်၏။ ဒါကသူ့ကိုလူကြိုက်များရရှိခဲ့ပေမယ့်တော်ဝင်အာဏာအချို့သမိုင်းပညာရှင်ရန်, ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှလှူဒါန်းခဲ့သောတစ်ဦးလုပ်ရပ်ပိတ်ဆို့။ လူးဝစ်ကသူ၏တရားရုံးစည်းလုံးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ; အကယ်စင်စစ်အခမ်းအနားနှင့်သူမကြိုက်မှူးမတ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးထိန်းသိမ်းလူးဝစ် '' မနှစ်သက်တရားရုံးတွင်အငယျဆုံးသောအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ကို ယူ. , အများအပြားမှူးမတ်တက်ရောက်ရန်စဲကြောင်းဆိုလိုသညျ။ ဤနည်းအားဖြင့်လူးဝစ်ဟာအထက်တန်းလွှာကြားတွင်မိမိအနေအထားကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေ။ သူကရိုးရိုးလူများ, ဒါမှမဟုတ်သူကသဘောမတူသောကိစ္စများ, ကျော် reply ငြင်းဆန်တစ်ခုအနုပညာပုံစံနှင့်ပြည်နယ်များ၏လုပ်ရပ်နှစ်ခုလုံးသို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေဖြစ်ခြင်းလှည့်။
လူးဝစ်ဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဧကရာဇ်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိကိုမြင်လျှင်, ဒါပေမယ့်နည်းနည်းခဲကိုယူ။ သူက start မှာ Turgot ၏ကြိုးစားခဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း, Necker ၏ပုံစံတစ်ခုအပြင်မြှင့်တင်ရန်လုပ်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်သူကတသမတ်တည်းတဦးတည်းယူအစိုးရအတွက်ခိုင်မာတဲ့အခန်းကဏ္ဍယူ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးန်ကြီးချုပ်နှင့်တူတစ်စုံတစ်ဦးကိုခန့်အပ်ရန်လည်းကောင်းပျက်ကွက်နှင့်ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည် တစ်ဦးစစ်အစိုးရကိုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဦးတည်ချက်မချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်အုပ်စုအားဖြင့် riven နှင့်တစ်လျှောက် muddling ။
လူးဝစ်ထို့နောက်အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံကဆန့်ကျင်အမေရိကန်တော်လှန်ရေးသမား၏ထောက်ခံမှုအတည်ပြု အမေရိကန်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲ ဟာသူတို့ရဲ့အဟောင်းဗြိတိန်ရန်သူတစ်ဦးသွေးထွက်သံယိုနှာခေါင်းပေးခြင်းနှင့်သူတို့၏စစ်ရေးအတွက်ပြင်သစ်ယုံကြည်မှုပြန်လည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်လူးဝစ်ပြင်သစ်အသစ်ပိုင်နက်ကိုဖမ်းဆုပ်တစ်လမ်းအဖြစ်စစ်မသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်ပြင်သစ်လုပ်နေတယ်အတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်, သူတို့ပြီးသားခဲ့သည်ထက် ပို. အကြွေးတွေနီးပါးရှိပါသည်။ လူးဝစ်ဒေဝါလီကနေပြင်သစ်ကြိုးစားကယ်ဖို့ Calonne လှည့်, ဒါပေမယ့် Ancien အစိုးရအာဏာပိုင်များနိုင်ငံရေး၏အုတ်မြစ်အဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတိုင်းအတာများနှင့်အခြားအဓိကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမှတဆင့်ဖိအားပေးဖို့ကြိုးစားမှုအတွက်အထူးသတစ်ခုညီလာခံမခေါ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်, ဘုရင်နှင့် parlements အကြား ဆက်စပ်. , ပြိုကျခဲ့သည်။
လူးဝစ်တစ်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်သို့ပြင်သစ်ကိုဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်လုပ်ဖို့ - ထိုသိသာဆန္ဒသက်သေ - လူးဝစ်တစ်ခု Estates-အထွေထွေကိုခေါ်။
အဆိုပါသမိုင်းပညာရှင်ဆရာယောဟနျ Hardman လူးဝစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျောထောက်နောက်ခံပေးထားခဲ့သော Calonne ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၏ငြင်းပယ်ခံရ, စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ weepy, ဝေးလံနှင့်စိတ်ဓာတ်သူ့ကိုထွက်ခွာ, ရှငျဘုရငျ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြောင်းလဲနေတဲ့သူ recover လုပ်ဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးရာမှတစ်ဦးအာရုံကြောချို့ယွင်းမှဦးဆောင်သော။ စောဒကတက်ထားပါတယ် (Hardman, လူးဝစ် XVI (2000), p ။ XVI နှင့်လူးဝစ် XVI (1993) စ။ 126. ) အမှန်စင်စစ်လူးဝစ်ဒါအနီးကပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပယ်ချခဲ့သည့်အခါအထူးသနှင့်ထင်ရသောပြင်သစ်, လူးဝစ်နိုင်ငံရေးအရနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပျက်စီးခဲ့ Calonne ထောက်ခံခဲ့သည် လာသောအခါသူသည်မိမိအဝန်ကြီးအိတ်ရတယ်။
လူးဝစ် XVI နှင့်အစောပိုင်းတော်လှန်ရေး
အဆိုပါ Estates အထွေထွေများ၏စုရုံးမကြာမီတော်လှန်လှည့်နှင့်လူးဝစ်ပြင်သစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်စေလိုကြောင်းသောလုပ်ရပ်တွေဟာအတွက်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားပေးခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးမှာဘုရင်စနစ်ဖျက်သိမ်းဖို့နည်းနည်းအလိုဆန္ဒရှိ၏, သူသည်တစ်ဦးထွန်းလင်းနှင့်ပိုပြီးအဆုံးအဖြတ်ရူပါရုံကိုနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိစေခြင်းငှါအဖြစ်အရေးပါတဲ့ဖြစ်ရပ်များမှတဆင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့လမ်းကြောင်းည့်ကျဇယားပေးနိုင်ခဲ့လျှင်လူးဝစ်အသစ်ဖန်တီးဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်၏တာဝန်ခံကနျြရစျခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ အဲဒီအစားသူကစတငျလှဲမှားဝေးကွာသောအလျှော့, သူသည်အားလုံးတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူဖို့ပွင့်လင်းသည်ထင်ရှားဒါတိတ်ဆိတ်ခဲ့ပါတယ်။ မိမိအသားကြီးနာမကျန်းဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့သည့်အတိုင်းလူးဝစ်သော့ချက်အချိန်လေးမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုထံမှကိုယ်တော်တိုင်ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။ လူးဝစ်တရားရုံးအဖွဲ့ခွဲများနှင့်ပြဿနာများကိုအကြောင်းကိုရှည်လျားစဉ်းစားရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင်သဘောထားကိုအားဖြင့်ဤနည်းနှင့်ကိုက်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်အဆိုပြုချက်နောက်ဆုံးတွင် Estates မျှော်ထားကြသောအခါဒါသူတို့ပြီးသားလူးဝစ်စပိုင်းတွင် "ဟုအဆင့်" ဟုခေါ်သည့်အမျိုးသားညီလာခံသို့ဖွဲ့စည်းခဲ့လေသည်။ လူးဝစ်ပြီးတော့သိပ်နောက်ကျပွဲတစ်ပွဲသူ၏ရူပါရုံအတွက်ကိုက်ညီမှုသက်သေများနှင့်, သူ့တုံ့ပြန်မှုလွဲမှားစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပေါ့, အအစွန်းရောက်သမားများ Estates လွဲမှားနှင့်စိတ်ပျက်။
သို့သော်ဤလူးဝစ်ရှိနေသော်လည်းလူသိရှင်ကြားက Man ၏အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းနဲ့တူဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုလက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်သူကသူ့ကိုယ်သူအသစ်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍအတွက် recast ခံရဖို့ခွင့်ပြုမယ်လို့သည်ထင်ရှားလာသောအခါမိမိအအများပြည်သူထောက်ခံမှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာလူးဝစ်အစဉ်အဆက်ပြည်တွင်းစစ်၏ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်း, လက်နက်အင်အားတို့ကအမျိုးသားညီလာခံဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်မျှသက်သေပြဖြစ်ပါသည်, သူသည်အစပိုင်းတွင်တပ်ဖွဲ့တွေပြေးစုဆောင်းရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ လူးဝစ်ပြင်သစ်သူအစိုးရအတွက်တန်းတူပြောဆိုခဲ့သည့်အတွက်တစ်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်လိုအပ်ယုံကြည်သည်အဖြစ်ဒါပေမယ့်နက်ရှိုင်းထိုင်တင်းမာမှုရှိ၏။ သူဟာဥပဒေပြု၏ဖန်ဆင်းခြင်းမရှိပြောရှိခြင်းမကြိုက်, သာသူ့ကိုသူအသုံးပြုအခါတိုင်းထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့တစ်ဖိနှိပ်ဗီတိုအာဏာပေးထားခဲ့သည်။
တော်လှန်ရေးတိုးတက်အမျှလူးဝစ်ဟာလက်ထောက်အားဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောအပြောင်းလဲမှုများအများအပြားမှဆန့်ကျင်ရှိနေဆဲ, ပုဂ္ဂလိကပိုင်တော်လှန်ရေးယုံင်း၏သင်တန်းကို run နှင့်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုပြန်ရောက်လိမ့်မယ်။ လူးဝစ်နှင့်အတူစိတ်ပျက်ကြီးပြင်းအဖြစ်သူကိုထိရောက်စွာအကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်ရှိရာပါရီ, ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတင်းအကျပ်ခဲ့သည်။ ဘုရင်စနစ်၏ရပ်တည်ချက်ကိုထပ်မံဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်နှင့်လူးဝစ်အင်ျဂလိ system ကိုတုမယ်လို့တစ်အခြေချဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်စတင်ခဲ့သည်; မိမိဘာသာရေးယုံကြည်ချက်စေတနာစိတ်ပျက်သောဓမ္မဆရာများ၏မြို့ပြဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူကအဓိကအမှားဖြစ်သက်သေပြမယ်လို့အဘယ်အရာကိုလုပ်သူသည်လုံခြုံရာသို့ပြေးကြနဲ့သူ့မိသားစုကိုကာကွယ်ရန်တပ်ဖွဲ့များစုဆောင်းရန်ကြိုးပမ်း; သူကယခုအစဉ်အဆက်အဖြစ်တစ်ဦးပြည်တွင်းစစ်စတင်မ Ancien အစိုးရအာဏာပိုင်များပြန်ပို့ခြင်းအမှုတွင်မရှိရည်ရွယ်ချက်ကိုခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ချင်တယ်။ ဇွန်လ 21 1791 အပေါ်အသှငျပွောငျးအတွက်ထွက်ခွာသူ Varennes မှာဖမ်းမိပြန်ပဲရစ်မှဝယ်ယူခဲ့သည်။
မိမိအဂုဏ်သိက္ခာကိုပျက်စီးခဲ့သည်။ အဆိုပါလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဘုရင်စနစ်မဖျက်ဆီးဘဲ - အစိုးရကဏ္ဍများကိုအနာဂတ်မှာအခြေချကာကွယ်ပေးရန်ပြန်ပေးဆွဲ၏သားကောင်အဖြစ်လူးဝစ်ဖော်ကျူးဖို့ကြိုးစား - ဒါပေမယ့်လူရဲ့အမြင်များကွဲလွဲကိုပြု၏။ ထွက်ပြေးလာသောတဲ့အခါမှာလူးဝစ်မကြာခဏသူ့ကိုမထိခိုက်စေသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသောကြေငြာ, ကျန်ရစ်ပေမယ့်လက်တွေ့တွင်လက်ထောက်ပိတ်ဆို့မခံရမီသစ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသို့အလုပ်လုပ်ရန်ရန်ကြိုးစားခဲ့သောတော်လှန်ရေးအစိုးရ၏ရှုထောင့်အပေါ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုကိုပေး၏။ အဆိုပါ Estates အထွေထွေ / အပန်းဖြေပြင်သစ် ။
လူးဝစ်အခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသူရ, မယ့်ကိုကိုယုံကြည်အနည်းငယ်အခြားလူမဟုတ်, လကျခံဖို့အတင်းအကြပ်ခံခဲ့ရသည်။ , လူးဝစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအခြားလူများသတိထားမိစေနိုင်ရန်အတွက်စာသားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ execute မှပြေလည်, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေရိုးရှင်းစွာတစ်သမ္မတနိုင်ငံဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုမြင်လျှင် နှင့်တစ်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့ခဲ့သူလက်ထောက်ခံစားခဲ့ရသည်။ လူးဝစ်လညျးမိမိဗီတိုအာဏာကိုသုံး, ဒါကြောင့်အကျင့်ကိုကျင့်သူ့ကိုဗီတိုအာဏာအောင်နေဖြင့်ရှင်ဘုရင်ကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့သူလက်ထောက်များကသတ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ချောက်သို့သွားလာ၏။ အဲဒီမှာပိုပြီးထွက်ပေါက်အစီအစဉ်များခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်လူးဝစ်ဖြစ်စေသူ့အစ်ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်, စကားအရကြောက်ခြင်းနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ဘယ်အချိန်မှာပြင်သစ်တစ်ဦးအဖြစ်ကြေညာ Pre-emptive စစ် ဧပြီ 1792, လူးဝစ်အတွက်သြစတြီးယားဆန့်ကျင် - မိမိအနေအထားခိုင်ခံ့စေ၏မည်ဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပေမယ့်ကြောက်လန့်စစ်ကြသောအခါရန်သူကဲ့သို့ ပို. ပို. ထင်ရှားလေ၏ Doom မယ်လို့ကျန်ရစ်ခဲ့သူ။ ရှင်ဘုရင်သည်ပဲရစ်လူအစုအဝေးပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ကြေငြာမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ထဲသို့တွန်းချခဲ့သည်မတိုင်မီပိုမိုဗီတိုအာဏာသို့အတင်းအဓမ္မခံရ, ပို. ပင်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျကြီးပွားသတည်း။ လူးဝစ်နှင့်သူ၏မိသားစုကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။
လျှို့ဝှက်စာတမ်းများလူးဝစ်တည်းခိုခဲ့ရှိရာ Tuileries နန်းတော်၌ဝှက်ထားသောရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်သည့်အခါလူးဝစ် '' ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုအောက်မှာနောက်ထပ် လာ. , တန်ပြန်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်စေ့စပ်ခဲ့သူတို့ကယခင်ရှင်ဘုရင်ကဆိုကြသည်မှရန်သူများကိုအသုံးပြုသော။ လူးဝစ်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တင်လျက်, သူကအချိန်ကြာမြင့်စွာနေတဲ့ပြင်သစ်ဘုရင်စနစ်၏ပြန်လာတားဆီးမယ်လို့ကွောကျရှံ့သော, တဦးတည်းရှောင်ရှားရန်မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်။ တစ်ခုတည်းသော, မလွှဲမရှောင်ရလဒ် - - သူအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်ကျဉ်းမြောင်းစွာရှင်သန်ရပ်တည်ရေးမှသူ၏လမ်းလဒ်ထိုးခဲ့ကြတယ်မှာကြိုးပမ်းမှုငြင်းဆန်ပြီးနောက်အသေသတ်ခြင်းကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကကွပ်မျက်ခံခဲ့ရသည် guillotine ဇန်နဝါရီ 21 1793 ရက်တွင်သော်လည်းမသူအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့လျှင်တာဝန်ယူသောသူတို့ကိုလွှတ်တော်မိမိသားကိုမိန့်မီ။ အဆိုပါ ရီပတ်ဘလီကန်တော်လှန်ရေး / သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ပုန်ကန် s ကို / အဆိုပါအကြမ်းဖက် / Thermidor ။
လူးဝစ် XVI ယေဘုယျအားဖြင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာဘုရင်စနစ်၏ပြိုကျ, ဒါမှမဟုတ်ပြင်သစ်အစဉ်အဆက်ကဒီစံပြတယ်သကဲ့သို့အနီးကပ်ကြီးကြပ်တဲ့သူဆီဥ, နှေးနှေး, အသံတိတ်ဧကရာဇ်အဖြစ်ပုံဖော်ထားသည်။ သူ၏အသက်တာ၏အဖြစ်မှန် - ယေဘုယျအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် - သူကအနည်းငယ်စဉ် Estates အထွေထွေကိုခေါ်မီအကြောင်းကိုအိပ်မက်မြင်ပြီမယ်လို့တစ်ဒီဂရီမှပြင်သစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော။ သော့ချက်အငြင်းအခုံတာဝန်လူးဝစ်တော်လှန်ရေး၏ဖြစ်ရပ်များအတွက်ရရှိထားသူအဘယ်အရာကို, ဒါမှမဟုတ်သူကအများကြီး သာ. ကြီးမြတ်တပ်ဖွဲ့တွေအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါသင်းဖွဲ့သည့်အခါတစ်ဦးယခုအချိန်တွင်ပြင်သစ်ကျော်ဦးမှဖြစ်ပျက်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အကြွင်းမဲ့အာဏာစိုးမိုးရေး၏သဘောတရားပြိုလဲခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကသတိရှိရှိအမေရိကန်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲသို့ ဝင်. အဘယ်သူသည်လူးဝစ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အဘယ်သူ၏မဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအစိုးရမှာကြိုးစားမှုများနှင့်အခမ်းအနားလူးဝစ်တတိယအိမ်ယာလက်ထောက်ကှာနှင့်အမျိုးသားညီလာခံ၏ပထမဦးဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းကိုနှိုးဆျော ။
လူးဝစ် XVI ၏လေ့လာရေးလူးဝစ်အားဖြင့်သူ့ကိုရေးသားအက္ခရာအစုတခုလွှတ်ပေးရန်, လူးဝစ် '' နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Vergennes ၏သားစဉ်မြေးဆက်နေဖြင့် 1990 ခုနှစ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ထိခိုက်ပါပြီ။ လူးဝစ် Pre-တော်လှန်ရေးကနေစာလုံးရှားပါးအဖြစ်, ဒီပစ္စည်းသမိုင်းပညာရှင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
William Wallace ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ကက်သရင်းက de Medici: ဘာသာတရား၏စစ်ပွဲများစဉ်အတွင်းအစွမ်းထက်ပြင်သစ်ဘုရင်မ
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး Timeline ကို: 1795 - 1799 (အဆိုပါ Directory ကို)
ဘယ်လို Carthaginian အထွေထွေ Hannibal Die ခဲ့သလား
Volksgemeinschaft ၏နာဇီ Idea ကဘာလဲခဲ့သလား
Agatha Christie ရဲ့လုံးချင်းစာအုပ်များအတွက် Hidden5လျှို့ဝှက်ချက်များ
Conjugation '' Apporter 'ဖို့တစ်ဦးကလမ်းညွှန် (ကိုယူခဲ့ဖို့)
Forma Comparativas en Inglés
အဆိုပါ USPS Hold မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ကရော် (Unprimed) က Canvas ပေါ်မှာ acrylic နှင့်အတူ Paint ဖို့အိုကေလား?
ကျေးလက်ဂီတဟယ်လိုသာ costume အကြံပြုချက်များ
ဂြိုလ်များနှင့် Planet ကို-မုဆိုး: Exoplanets များအတွက်ရှာဖွေရန်
Selena Quintanilla-ဖာရက်၏ပုံပြင်, တိုင်ဂျန်နို၏ဘုရင်မ
10 profesiones con မြို့တော်ဝန် demanda က de Nuevo empleo en Estados UNIDO
မိသားစု Legends - ထူးအိမ်သင်သို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်?
တစ်ဦးကောင်း TOEIC Speaking နှင့် Writing ရမှတ်ကဘာလဲ?
တွေ့ဆုံ Hera, ဂရိနတ်ဘုရားများ၏ဘုရင်မ
Rosh HaShanah စားနပ်ရိက္ခာအကောက်ခွန်
ဘယ်လို Dyson ဟာရဲ့အသံထက်မြန်ဆံပင်လေမှုတ်စက်အလုပ်လုပ်ပုံ
အဆိုပါ Augustan ခေတ်
'' Brave New World '' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သန့်ရှင်းသော Rudraksha: စူပါအမျိုးအနွယ်
School မှာအောင်မြင်သော Be လုပ်နည်း